System Alternating Current sy Direct Current System (AC&DC System), China Alternating Current System sy Direct Current System (AC&DC System) Manufacturers, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd
Home>Mpanome vokatra>Fitaovam-pitaovana mekanika sy elektrika feno>AC&DC System
1. Ny fitaovana rafitra DC dia manana ny fiasan'ny fandrefesana lavitra, famantarana lavitra, fanaraha-maso lavitra, sns., izay afaka mahatsapa ny fandidiana tsy misy fepetra ary afaka mihaona amin'ny asa mahazatra ary miantoka ny fanokafana sy ny fanakatonana ny fiarovana amin'ny relay, ny fitaovana mandeha ho azy, ny faritra avo lenta. fiatoana, jiro amin'ny lozam-pifamoivoizana ary solosaina tsy tapaka amin'ny toe-javatra misy loza. Ny famatsiana herinaratra dia manome hery DC na rehefa very ny herin'ny AC dia omena amin'ny alàlan'ny fitaovana inverter ny herinaratra AC.
Mety amin'ny toerana mila famatsiana herinaratra DC toy ny toby famokarana herinaratra, substations, lalamby elektrika, petrochemical, metallurgy, toby fiantsonana ary trano lehibe, mba hiantohana ny fiasan'ny fitaovana azo antoka sy azo antoka.
2. Ny fitaovana fitsinjarana herinaratra AC an'ny fitaovana faharoa herinaratra dia mifototra amin'ny fepetra mifandraika amin'ny "Power Plant, Substation Engineering and Relay Protection Test Instrument Configuration Quota" ary ny Minisiteran'ny Indostria Hery Elektrika "Power System Relay Protection and Safety Automatic Equipment Fepetra miady amin'ny lozam-pifamoivoizana". Ny fifantenana ireo mpanapaka circuit miniature avo lenta dia miaro ny circuit fohy sy ny enta-mavesatra amin'ny circuit, manome famatsiana herinaratra faharoa mety sy azo itokisana ho an'ny asa fitaovana faharoa eo an-toerana, ary manome antoka azo antoka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa isan-karazany sy ny fiantohana. ny fiarovana ny mpiasa sy ny fitaovana.
1. Ny endri-javatra ny DC rafitra fitaovana:
Microcomputer mifehy ny hafainganam-pandeha avo DC fitaovana rafitra manana malefaka malefaka sy tsy miovaova amin'izao fotoana izao marina, kely habeny, maivana lanja, avo fahombiazana, Output ripple, ambany harmonic distortion, avo ny automatique sy avo azo itokisana, ary azo fitaovana amin'ny cadmium Nickel bateria, asidra -Ny bateria porofo sy ny batteries lead-asid fehezin'ny valve dia mety tsy ho voakarakara.
2. Ny faritry ny fampiharana ny fitaovana rafitra AC:
(1) Rehefa feno tanteraka ny fahafaha-mamokatra ny fitaovana, dia hametra ho azy ny ankehitriny tsy misy overloading;
(2) Ny fitaovana dia manana ny fiasan'ny fanaraha-maso ny fitaovana, ny fandinihan-tena diso, ny fanarenana ny tenany ary ny fitantanana manan-tsaina.
(3) Ny fitaovana dia fehezina ho loharano amin'izao fotoana izao mandritra ny fandidiana, ary tsy misy ny mety hisian'ny resonance amin'ny impedance rafitra
Turbine Francis Horizontal ho an'ny tobim-pamokarana herinaratra kely sy antonony